(हरी) प्रर्दशन होला त जेठ ४ मा ? यस्तो छ कारण ! - Nepali Cinema News
Home > Nepali > (हरी) प्रर्दशन होला त जेठ ४ मा ? यस्तो छ कारण !
(हरी) प्रर्दशन होला त जेठ ४ मा ? यस्तो छ कारण !
चलचित्र पशुपती प्रसादमा भस्मे डनको भुमिकामा अभिनय गरेपछि एका एक नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सार्वधीक चर्चामा आएका अभिनेता विपिन कार्की अभिनित पछिल्लो चलचित्र हरी जेठ ४ बाट प्रर्दशन हुने बताईएको छ । तर नेपाल चलचित्र निर्माता संघले बिभिन्न किसिमका माग राख्दै जेठ २ गतेबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
निर्माता संघको माग प्रति चलचित्र संघ गम्भीर नदेखीएकाले आन्दोलन हुने सम्भावना बढेको छ । यदि आन्दोलन भयो भने हरी सँगै जेठ २ गतेबाट पछाडी प्रर्दशन हुने सबै चलचित्रको प्रर्दशन रोकीने छ ।
प्रर्दशनको विषयमा अन्यौलता भएको कारणले पनि यो चलचित्रको प्रचार प्रसारमा निर्माण पक्षले त्यती खुलेर लागेको पाईएको छैन् ।
त्यसो त पशुपती प्रसाद र जात्रा बाहेक पछिल्लो समय विपिन अभिनित प्राय ः सबै चलचित्र ब्यावसायीक रुपमा असफल भएका छन् । यो चलचित्रले पनि बक्स अफिसमा राम्रै कमाई गर्ने कुरामा शंका गर्ने प्रसस्तै ठाउँहरु छन् ।
हरीलाई शुभलाभ फिल्म प्रोडक्सनको ब्यानरमा सफल केसी र प्रतिक गुरुङ्गले लेखन तथा निर्देशन गरेका छन्, भने चलचित्रमा विपिनका अलावा कमलमणी नेपाल,सुनिता श्रेष्ठ ठाकुर,थिन्ले ल्हामो,लोकनाथ आर्चाय, लक्ष्मी बर्देवा लगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।
हरीलाई योगेश्वर पौडेल,थाक्पा तामाङ्ग र माधव थापाले निर्माण गरेका हुन् ।